January 26, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 26, 2021
(Manchester) 27 Jan 2021. Manchester City ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda West Bromwich oo ay ku booqatay garoonka The Hawthorns, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-5, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca 20–aad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-3 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd […]Sii akhriso
(England) 27 Jan 2021. Arsenal ayaa guul ay u qalantay ka soo gaartay kooxda Southampton oo ay ku booqatay garoonka St. Mary’s, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca 20–aad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee […]Sii akhriso
(England) 216 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha West Bromwich iyo Man City ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda West Bromwich ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Manchester City si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo […]Sii akhriso
(England) 216 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Southampton iyo Arsenal ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Southampton ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Arsenal si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Southampton […]Sii akhriso
(London) 26 Jan 2021. Chelsea ayaa xaqiijisay in Thomas Tuchel uu yahay tababaraheeda cusub ee kooxda isagoo qalinka ku duugay heshiis 18 bilood ah. Lampard ayaa si lama filaan ah shaqada looga ceyriyay Isniintii kaddib qaab ciyaareed xun oo uu soo bandhigay taasoo ka dhigtay inay ku jiraan kaalinta 9-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League […]Sii akhriso
Wasiirka Haweenka XFS oo maanta la kulantay ergayga QM ee Soomaaliya
Soomaaliya January 26, 2021
Muqdisho (SONNA)-Wasiirka wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka, Soomaaliya Marwo Xaniifa Maxamed Ibraahim ayaa maanta la kulantay ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobey ee Soomaaliya danjire James Swan. Ayagoo ka wada hadlay arrimo ay kamid yihiin xaqiijinta qoonddada haweenka ee 30%, ilaalinta xuquuqda aadaha xilliga doorashada iyo arrimo kale oo muhiim u Sii akhriso
Somali Journalists Worry About Arrests Ahead of Elections – Voice of America
Somali News January 26, 2021
Somali Journalists Worry About Arrests Ahead of Elections Voice of AmericaSii akhriso
Departing US Envoy Warns Ethiopia Against Violence – Voice of America
Ethiopia News January 26, 2021
Departing US Envoy Warns Ethiopia Against Violence Voice of AmericaSii akhriso
(Manchester) 26 Jan 2021. Xiddigii hore kooxda Manchester City ee Micah Richards ayaa sheegay in haddii ay Sky Blue u dhaqaaqdo saxiixa laacibka reer Spain ee Diego Costa, ay xaqiijin doonaan ku guuleysiga horyaalka Premier League. Diego Costa ayaa wali ah koox la’aan kaddib markii uu kansalay heshiiskii uu kula jiray kooxda Atletico Madrid. Xidigii hore […]Sii akhriso
Ole Gunnar Solskjær oo la dardaarmay Frank Lampard kaddib markii shaqada laga cayriyay
(Manchester) 26 Jan 2021. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa rumeysan in tababarihii hore ee Chelsea ee Frank Lampard uu yeelan doono xirfad wanaagsan oo dhanka tababarka ah. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa shalay si rasmi ah u shaacisay inay ceyrisay tababaraheedii Frank Lampard kaasoo muddooyinkii u dambeeyay la hadal hayay Sii akhriso